Nhengo dzeMDC-T Dzinoparura Bazi Idzva muYeoville muSouth Africa
Nhengo dzebato rinopikisa hurumende reMDC-T dziri muSouth Africa neMugovera dzakaparura bazi idzva, mumusha weYeovile muJohannesburg mukuedza kwadzo kusimbisa bato iri munyika yeSouth Africa.
Vachitaura pakuparurwa kwebazi iri, vanoona nezvevechidiki muMDC-T muJohannesburg, VaTime Siphuma vakati vachatungamirira bazi iri vanofanira kushanda nemamwe mapazi mudunhu reJohannesburg kuitira kuti bato reMDC-T ribudirire musarudzo dzichaitwa gore rino.
VaShepard Mashingaidze, avo vakasarudzwa kuve munyori, vakati vachashanda nesimba mukusimudzira nekuunza runyararo mubato ravo reMDC-T kuitira kuti munhu wese agokwanisa kugara zvakanaka mune ramangwana.
Mutevedzeri vavo, VaSamson Matimba vanoti chinangwa chavo pari zvino kusimudzira nekukurudzira vechidiki mubato reMDC-T vari muSouth Africa, kuti vanovhota musarudzo dzichaitwa gore rino.
Imwewo nhengo ye bato iri yaive pamusangano uyu, ndichiremba, VaTemba Majasi. VaMajasi vakati vanofara nekuumbwa kwebazi iri, uyewo chiratidzo chekuti mhuri yeZimbabwe muSouth Africa ine chido chekuti nyika yavo ibudirire.
VaCollins Danha ndivo vakasarudzwa kuve sachigaro webazi iri, VaLeo Moyo, vakasarudzwa semubati wehomwe, VaCourage Hondo vachisarudzwawo semunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano.
Kune vatsigiri vanosvika zana vakange vari pakuparurwa kwebazi iri, uyewo ungano iyi ndiyo yekutanga kuitwa nenhengo dzeMDC-T muSouth Africa kubva zvakashaya vaive mutungamiriri webato iri wekutanga, VaMorganTsvangirai.